Video: Obere Web Design & Marketing | Martech Zone
Wednesday, October 12, 2011 Tọzdee, Ọktoba 27, 2011 Douglas Karr
Vidio teknụzụ ahịa nke ọnwa a na-ewebata ụlọ ọrụ teknụzụ dịtụ iche. Mba, anyị anaghị amalite ibipụta vidiyo nke ụlọ ọrụ ọ bụla na Martech - mana anyị chọrọ ịnye ụfọdụ nghọta n'ime ụlọ ọrụ ọhụụ. Mbọn, imepụta na ụlọ ọrụ ịzụ ahịa na-arụ ọrụ na ngwọta na-abụghị shelf. Nke a abụghị ikpe na SmallBox.
Ka oge na-aga, ndị otu na SmallBox ewepụtala sistemụ njikwa ọdịnaya nke ha nke ahaziri maka mkpa ndị ahịa ọ bụla ha webatara. Sọftụwia ahụ dị gara gara ma nwee ụdịrị modulu na-enye ohere maka ịgbakwunye na njirimara ọhụụ na arụmọrụ karịa oge. SmallBox anọgidewo na-emepe atụmatụ ndị nyeere ndị ahịa ha aka n'ezie, gụnyere modulu FAQ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anọgide na-anwa ịchọta otu ụzọ-ụzọ niile, SmallBox bụ ụlọ ọrụ pụrụ iche nke kwenyere na ndị ahịa ọ bụla nwere onwe ha, chọrọ azịza dị iche na usoro ahịa dị iche. Ọ bụrụ na ị na-eche, SmallBox anaghị eji CMS ya mechie ụlọ ọrụ, ma. Ndị ahịa nweere onwe ha ịpụ na ihe ngwọta maka ojiji nke aka ha.